QIIMAYN: Shanta Xiddig Ee Manchester United Ay Doonayso Xagaaga Oo La Qiimeeyey & Midka Ay Ugu Baahida Badan Yihiin | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaQIIMAYN: Shanta Xiddig Ee Manchester United Ay Doonayso Xagaaga Oo La Qiimeeyey & Midka Ay Ugu Baahida Badan Yihiin
QIIMAYN: Shanta Xiddig Ee Manchester United Ay Doonayso Xagaaga Oo La Qiimeeyey & Midka Ay Ugu Baahida Badan Yihiin
Manchester United waxay mar horeba sii shaxaysatay xiddigaha ay saxeexooda ka shaqayn doonta marka uu furmo suuqa iibak ciyaartoyda ee xagaaga soo aaddan, markaas oo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu suuqa u geli doono sidii uu ula soo wareegi lahaa xiddigo ka caawiya inay la loollami karaan Manchester City oo ah kooxda kaliya ee ka horreysa miiska kala-sarraynta iyo heerka awoodda ee xili ciyaareedkan.
Red Devils ayaa lagu soo warramayaa inay la saxeexan doonto laba illaa saddex ciyaartoy oo uu magacyadoodu ay saaran yihiin miiska maamulka kooxda, si degdeg ahna ay ugu dhaqaaqi doonaan marka uu suuqu furmo, laakiin qaarkood ayay ka shaqayn doonaan sidii ay usii qancin lahaayeen xataa iyadoo uu suuqu xidhan yahay.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa labadii suuq ee hore waxa uu kooxdiisa kusoo xoojiyey ciyaartooyo qaarkood la dareemay sida ay sare ugu qaadeen tayada kooxda, sida Burno Fernandes, hase yeeshee Jadon Sancho oo xagaagii ay si weyn u doonayeen ayay ku guul-darraysteen inay soo xero geliyaan.
Laakiin laacibka reer England ayaa wali ku jira xiddigaha ay indhaha kooxdu hayaan, inkasta oo warar soo baxay usbuucan ay tibaaxayaan in isbeddel ku yimid damacii weynaa ee ay laacibkan u haysay. Waxa kale oo uu tababaraha reer Norway doonayaa difaac uu ku xoojiyo Harry Maguire.
Wargeyska The Sun ee kasoo baxa Ingiriiska ayaa shaaciyey shanta ciyaartoy ee magacyadoodu miiska u saaran yihiin Solskjaer, waxaanu raaciyey qiimaynta laacibiinta ay ugu baahida badan yihiin, iyadoo ay siiyeen kala mudnaan la xidhiidha sida ay tahay inay ugu kala hawl-galaan.
Difaaca Bayern Munich ee David Alaba oo si xor ah kaga tegaya kooxdiisa marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyda isla markaana lala xidhiidhinayo kooxaha PSG, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Man City, Liverpool iyo Chelsea ayay Manchester United tahay kooxda siddeedaad ee laacibkan doonaysa.
28 jirkan oo wax lacag ahi aanay kaga baxaynin iibkiisa ayaa Manchester United ku xidhaya mushaharka ugu badan abid ee ay ciyaartoy siiso oo ah £400,000 Gini toddobaadkii, laakiin taasi waxay macquul ku tahay maadaama uu si bilaash ah ugu soo wareegayo.
Laacibkan ayaa qiimaynta baahida Man United ee uu wargeyska The Sun sameeyey ka galay kaalinta shanaad ee ugu dambaysa.
Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ay saxeexiisa ku xidhay £108 milyan oo Gini, ayaa wali kusii jira xiddigaha bartilmaameedka u ah Solskjaer, laakiin xiisaha Ole ayaa hoos u dhacay kaddib markii uu bishii January lasoo wareegay da’yarka Amad Diallo, sidoo kalena uu Mason Greenwood isku muujiyey inuu ka ciyaari karayo booskaas.
Qiimaynta wargeyska ee baahida Manchester United ayuu Jadon Sancho ka galay kaalinta afraad.
Difaaca Real Madrid iyo xulka qaranka France oo lagu soo warramayo inay suurtogal tahay in lagu helo £44 milyan oo Gini ayaa kaalinta saddexaad kasoo galay xiddigaha ay United u baahan tahay.
Real Madrid ayaa ku qasbanaan doonta inay iibiso Varane haddii uu kusii adkaysto in aanu kordhinin heshiiskiisa oo kaliya 17 bilood ay ka hadhsan yihiin, si ay uga baaqsadaan inuu si xor ah uga tago dhamaadka xili ciyaareedka dambe.
Jules Kounde oo difaaca uga ciyaara Sevilla, da’diisuna ay tahay 22 jir ayay United ku jirtaa liiska kooxaha doonaya, iyadoo Solskjaer uu rumaysan yahay in laacibkani uu ku habboon yahay shaxdiisa marka loo eego Varane iyo Alaba.
£60 milyan oo Gini ayuu qiimihiisu yahay, waxaanu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan ee difaaca waqtigan.
Weeraryahanka reer Norway ee Erling Haaland ayaa kaalinta koowaad ka galay xiddigaha ay Manchester United u baahan tahay inay lasoo saxeexato, iyadoo Borussia Dortmund lagaga soo faro-maroojin karayo £65 milyan oo Gini oo qandaraaskiisa lagu burburin karayo.
Maadaama Edinson Cavani ay da’diisu weyn tahay oo aanu mustaqbal ku lahayn Old Trafford, maadaama Anthony Martial aanu ahayn dhaliye Manchester United isku hallaynayso, maadaama uu Rashford isku rogay mid garab ka ciyaara oo aanay shabaqa saaxiib ahayn, tababare Ole Gunnar Solskajer ayaa go’aansaday inuu saxeexa Haaland kula tartamo kooxaha ka midka tahay Real Madrid oo iyaguna doonaya.